Uphando lweDisney luvavanya ukutshaja ngaphandle kwamacingo, kwaye ewe iyasebenza | IPhone iindaba
Uphando lweDisney luvavanya ukutshaja ngaphandle kwamacingo, kwaye ewe kuyasebenza
Lo ngomnye wemicimbi abasebenzisi abanokucinga ukuba le sele yenziwe ixesha elide, kodwa akukho nto iqhubekayo kwinyani kwaye loo nto iyinyani yokutshaja ngaphandle kwamacingo namhlanje asinakuthi ikhona. Makhe ndichaze, ukutshaja ngaphandle kwamacingo esinako namhlanje kwezinye (kunokuba zimbalwa) ii-smartphones kungenxa yoqhelisoOko kukuthi, umsebenzisi kufuneka ayishiye ifowuni kwisiseko esidityaniswe nentambo eludongeni, ke asisajongani nokutshaja okwenene ngaphandle kwamacingo.
Ngokuqinisekileyo uninzi lwabo bakhoyo sele beyicacisile le nto, kodwa baninzi abantu abangacacanga ngayo, kungoko ke kufuneka sigqamise oku iimvavanyo ezenziwa luPhando lweDisney, isebe leDisney esaziyo sonke, kwaye oko kubanika iziphumo ezilungileyo.
Itekhnoloji abayiphuhlisayo kwaye ebonakala ngathi isebenza kwiimvavanyo zokuqala zokwenyani, kulula ukuyichaza: xa ungena kwigumbi eline-smartphone epokothweni le ngokuzenzekelayo ngaphandle kwesidingo saso nasiphi na isiseko okanye okufanayo, iqala ukutshaja ngokuzenzekelayo. Ewe, yile nto kanye bayizalisileyo ngezi mvavanyo kwaye yile teknoloji engenazingcingo kuwo onke amagama.
Ngokucacileyo konke oku kukwinqanaba lovavanyo kodwa nantsi ividiyo apho unokubona itekhnoloji ye "quasistatic cavity resonance" (QSCR) eyenza amazibuko kwigumbi ikwazi ukutshaja isixhobo ngaphandle kokwenza nantoni na.
Kodwa obu buchwephesha budinga iimfuno ezithile ukuze zisebenze kunye nokhuseleko ekubonakala ukuba "alunakuphumelela" namhlanje. Kuvavanyo olwenziwe liqela, iindonga, umgangatho nophahla lwelo gumbi kufuneka zenziwe ngesinyithi kwaye embindini sifumana ityhubhu yobhedu ezaliswe zizinto ezincinisayo kwimeko eyiyo kuya kufuneka ikhuselwe ukuze ingenzi ingozi kuba iyakwazi ukuhambisa ukuya kuthi ga kwi-1.900 i-watts zamandla, ezithi zifezekise amandla eemagnethi ayimfuneko ukushaja isixhobo ngaphandle kwefowuni.
Akuthandabuzeki inkqubela phambili iyinyani kwaye inomdla kakhulu ekufumaneni ukutshaja ngaphandle kweentamboNgapha koko, ayingabo bodwa abaphanda beqhuba iimvavanyo zokuphumeza le teknoloji yokutshaja, ke olu khuphiswano malunga noku luhle kakhulu. Kodwa kufuneka sazi ukuba ukongeza koko sele kutshiwo (igumbi, ubhedu, njl.) Kuyimfuneko ukuba isixhobo ngokwaso sihambelane nolu hlobo lomthwalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Uphando lweDisney luvavanya ukutshaja ngaphandle kwamacingo, kwaye ewe kuyasebenza
Ndiyaqonda ukuba babhekisa kwiiwatts zamandla, akunjalo? Itekhnoloji ayisiyonto intsha, ukuba isicelo.
I-Apple Watch 3 iya kuba nescreen esitsha
I-Apple isungula i-beta yesithathu yoluntu ye-iOS 10.3 kunye neMacOS 10.12.4